Akụkọ - Ka anyị hụ otu esi arụ ọrụ na-agwụ ike
Ka anyị hụ otú ndị na-agwụ ike kwesịrị mere
The nkenke nke na-agwụ ike bụ nnọọ elu, na akụkụ nkenke nke ezi na-agwụ ike nwere ike iru IT8 ~ IT7, na aperture nwere ike na-achịkwa n'ime 0.01mm nkenke. Ọ bụrụ na ọ dị mma na-agwụ ike, na machining nkenke nwere ike iru TT7-IT6, na elu àgwà dị mma. maka na-agwụ ike n'ozuzu, ihu iwe Ra bụ 1.6 ~ 0.8 m. Ka anyị hụ otu esi arụ ọrụ na-agwụ ike.
Usoro na-agwụ ike na nlezianya
Egwuregwu na-agwụ ike
Ọ dị ezigbo mkpa iji wụnye ngwá ọrụ na-agwụ ike na-arụ ọrụ akụkụ, karịsịa maka nhazi ọrụ site na iji ụkpụrụ eccentric. Mgbe ị wụnye ngwá ọrụ na-agwụ ike, ọ ghaghị ị attentiona ntị iji hụ isi ụgbọ mmiri na-agwụ ike nke ngwá ọrụ na-agwụ ike, ma ọ bụ otu ọkwa ahụ na ntụziaka ndepụta nke isi ngwa ngwa na-agwụ ike? Wụnye na otu larịị iji hụ na ọtụtụ akụkụ mbepụ bụ na nkuku akuku igwe.
Na-agwụ ike ngwá ọrụ na-agbalị na-agwụ ike
Ngwá ọrụ na-agwụ ike ga-edozi ụgwọ nke 0.3-0.5mm dịka ihe achọrọ maka usoro nrụpụta, na imegharị na oghere na-agwụ ike ga-edozi ụgwọ nke ihe na-agwụ ike -0.5mm dị ka ego nke oghere mbụ. A ga-akwụ ụgwọ maka ụgwọ ọrụ dị mma na-agwụ ike.
Mgbe arụnyere na-agwụ ike arụnyere na gbazinyere ya, ọ dị mkpa iji nwalee ma nyochaa ma debugging nke na-agwụ ike ngwá ọrụ osobo chọrọ nke siri ike agwụ ike.
Ihe na-agwụ ike
Tupu agwụ ike na machining, jiri nlezianya lelee ma tooling, n'ọnọdu akwụkwọ nke workpiece na onye ọ bụla n'ọnọdu mmewere bụ mụ na a pụrụ ịdabere na.
Gịnị bụ dayameta nke oghere mbụ iji rụọ ya na calipers? Gbakọọ ego ole ị ga-eji rụọ ọrụ?
Lelee ma ugboro ugboro n'ọnọdu ziri ezi na ike itule ziri ezi nke akụrụngwa (spindle) izute chọrọ nke machining tupu agwụ ike.
A ghaghị ịba uru dị egwu nke nkwụsịtụ ike ndọda nke ogwe na-agwụ ike na usoro nke ịgbakwunye oghere na-agwụ ike iji belata mmetụta nke ịkwa osisi nke centrifugal site na imezi usoro nkwụsịtụ n'ụzọ ezi uche dị na ya.
Dị ka ike ike na-agwụ ike, ọkara mma-agwụ ike, ezi na-agwụ ike iji ezi uche kesaa oyi akwa na-agwụ ike udeme, ike ike agwụ ike udeme nke banyere 0.5mm kwesịrị ekwesị; Ezi na-agwụ ike, ezi na-agwụ ike oke nke banyere 0.15mm, iji zere ọkara mma na-agwụ ike oke mere site ukwuu oke ka cutter emetụta nkenke nke ezi na-agwụ ike oke mgbanwe.
O siri ike ịhazi ihe, nkenke na-agwụ ike (ndidi ≤0.02mm) nwere ike ime ka usoro nhazi ihe na-agwụ ike dị mma, oke na-agwụ ike abụghị ihe na-erughị 0.05mm iji zere machining elu na-agbanwe cutter.
Na usoro nke na-agwụ ike ngwá ọrụ na ngwá ọrụ, ga ntị ka zere-agwụ ike ngwá ọrụ na-arụ ọrụ akụkụ (agụba na mma ngọngọ) na mmetụta na mma ngọngọ, mmebi nke agụba na mma ngọngọ ndu uzo nke na-agwụ ike ngwá ọrụ ukpụhọde uru mgbanwe emetụta oghere imegharị ihe nke ziri ezi.
Na usoro na-agwụ ike, attentionaa ntị na-zuru ezu jụrụ, dịkwuo mmanu mmetụta nke machining akụkụ iji belata ọnwụ ike.
Mwepu Chip na-arụ ọrụ nke ọma na usoro nhazi ọ bụla iji gbochie ikere òkè na mbepụ nke abụọ iji metụta izi ezi nke oghere na ogo elu.
N'oge usoro na-agwụ ike, lelee akara abrasion nke cutter (agụba) n'oge ọ bụla, ma dochie ya n'oge iji hụ na mmezi ọrụ nke oghere; A machibidoro ezigbo usoro na-agwụ ike iji dochie agụba iji gbochie njehie; Mgbe ọ bụla nzọụkwụ nke ịkpụzi, nditịm mejuputa usoro àgwà akara chọrọ, jiri nlezianya nwalee n'ezie machining oghere ma mee ezi ndekọ, ka ikwado analysis, ukpụhọde na mma nke na-agwụ ike machining.